Injabulo abafundi bakuleli beyofundela ubudokotela | IOL Isolezwe
Injabulo abafundi bakuleli beyofundela ubudokotela
Isolezwe / 31 August 2012, 2:46pm /
ABAFUNDI abangene ngaphansi kohlelo lokufundela iziqu zobudokotela eCuba. Isithombe: MBALI KHANYILE
UVALO nenjabulo ngeminye yemizwa egqamile kubafundi abangu-10 baKwaZulu-Natal abayofundela ubudokotela eCuba.
Laba bafundi abahambe izolo ukuyoqala izifundo zabo ngaphansi kohlelo lweCuba neNingizimu Afrika lokuqeqesha intsha yakuleli efuna ukufundela ubudokotela.
UThandeka Nhlozi (20) waKwaMhlabuyalingana ongomunye wabafundi abazofundela ubudokotela eCuba, uthe yize ejabulile kepha usanovalo lokuhamba.
Okubalulekile kuye ukuthi ufuna ukubuya ashintshe indlela ubudokotela obuyibo lapha eNingizimu Afrika.
“Uma ngibuya ngifisa ukubona odokotela abaningi besebenza ngaphandle noma emitholampilo ngoba isikhathi esiningi silinda abantu ukuthi baze baye ezibhedlela,” kusho uThandeka.
Uthe asekufunde ngohlelo lwaseCuba ukuthi abantu babasiza besasemitholampilo okuyindlela yokugwema ukugcwala ezibhedlela. Le ntokazi esencane isanda kuye-ka izifundo zeBiochemistry ngenxa yesifiso sayo sokuba udokotela. Izifundo zeBioche-mistry bezizomnika ithuba lokuthi asebenze esikhungweni sokwenza ucwaningo.
“Ngibonile ukuthi ngisho ngingaqhubeka ukwenza izifundo zeBiochemistry ngeke ngijabule ngoba akukho okunye ebengifuna ukuba yikho ngaphandle kokuba ngudokotela,” kusho uThandeka.
Uthe ubonga ukuthi abazali bakhe bakwazile ukumeseka bamvumela ukuthi ahambe yize nabo besaba ukuhlukana naye isikhathi eside. Unina uNkk Hlengiwe Nhlozi (42), uthe okubalulekile kuye ukuthi indodakazi yakhe izokwenza into eyithandayo.
Uhlelo lokufundiswa kwentsha yakuleli eCuba seluneminyaka engu-16 lukhona kanti futhi seluhlomulise abafundi abaningi abavela ezifundazweni ezahlukene.
Ohlanganisa lolu hlelo KwaZulu Natal uMnuz Kwazi Mshengu okunguyena ozohamba nalaba bafundi uthe bonke bakujahile ukufika eCuba.
Kulindeleke ukuthi bafike khona kusasa, bazobuya eNingizimu Afrika emuva kweminya-ka emibili bezovakashela imindeni yabo.
Omunye wabafundi asebephakathi nezifundo zabo eCuba, uLonda Gumede (25) owenza unyaka wesihlanu, uthe usefunde okuningi kulolu hlelo futhi uzimisele ukusebenza ezibhedlela zasemakhaya.
“Bayasishodela odo-kotela lapha eNingizimu Afrika ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya. Ngike ngibuke esibhedlela salapho engiphuma khona lapho okuke kube khona odokotela ababili noma abathathu isibhedlela sonke. Yingakho ngifuna ukusebenza ezibhedlela zasemakhaya uma sengibuya ngonyaka ozayo,” kusho uLonda.